Anigu waxaan ahay (15) mana la ii oggola in aan sigaar ku cabbo dalka Jarmalka. Sabab? Maxaana laga wadaa Jugendschutzgesetz (qaanuunka ilaalinta dhallinyarada)? – Tips for refugees
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay (gabar, 15 sanno jir ah) la iima oggola in aan banaanka kaligayga aado. Haddii ay gabdhaha saaxiibadayda ahi wax sameynayaan waxaan ku khasbanahay in aan diido ama in uu hore ii raaco walaalkayga. Maxaan sameeyaa?
Next Next post: Aniga oo ah (wiil 15 jir ah) waxaan saaxiib la’ahay gabar Jarmal u dhallatay. Inta baddan waxaynu kala leenahay fikrado kala duwan: waxay u labisataa si dareenka qofka kicinaysa. Inta baddan ayadu waxay samaysaa waxyaabo ayada oo aan ii sheegin ama aan ila soconin. Anigu midaasi ma jecli. Ma yihiin dhammaan gabdhaha Jarmalka kuwo sidaan oo kale ah?